အမျိုးသမီးများရဲ. စွဲမက်စရာ ခန္တာကိုယ်အလှကောက်ကြောင်းကို ပန်းချီရေးဆွဲပြခဲ့တဲ့ ပန်းချီဆရာ | Buzzy
အမျိုးသမီးများရဲ. စွဲမက်စရာ ခန္တာကိုယ်အလှကောက်ကြောင်းကို ပန်းချီရေးဆွဲပြခဲ့တဲ့ ပန်းချီဆရာ
ပုံရိပ်နှစ်ဆယ်လုံးဟာ ရင်သပ်ရှုမော ဖြစ်စေပါတယ်
Sergei Marshennikov အမည်ရှိ ရုရှားအနုပညာရှင်တစ်ဦးဟာ ဆီဆေးနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ. ခန္တာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှကို ရေးဆွဲဖန်တီးပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ. ဖန်တီးမှုမှာဆိုရင် လှပမှု နဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ဟာ ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာ သိသာစေခဲ့ပါတယ်။
Sergei Marshennikov အမညျရှိ ရုရှားအနုပညာရှငျတဈဦးဟာ ဆီဆေးနဲ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ. ခန်တာကိုယျ ကောကျကွောငျးအလှကို ရေးဆှဲဖနျတီးပွခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ. ဖနျတီးမှုမှာဆိုရငျ လှပမှု နဲ့ စှဲမကျဖှယျဟာ ဘယျလိုမြိုးဆိုတာ သိသာစခေဲ့ပါတယျ။